> Resource> Video> Olee mbubata camcorder Videos ka Sony Vegas
Camcorder videos-emekarị mkpa ka a dezie tupu ha na-ele na TV, nkwanye online, ma ọ bụ ọkụ na-DVD dị ka onyinye. Sony Vegas bụ ike kacha ike camcorder video edezi software na ahịa. Ọ na-akwado kasị video formats dekọrọ camcorders, karịsịa Sony camcorders si SD ka HD camcorders.
Mgbe ụfọdụ, importing camcorder vidiyo na Sony Vegas bụghị otú mfe. Isiokwu a ga-enyere gị aka ịchọta azịza banyere otú mbubata camcorder vidiyo na Sony Vegas, kewara DVD camcorder video ka Vegas na-abụghị DVD camcorder video ka Vegas.
Nkebi nke 1: Vegas Import DVD Disc site DVD camcorder
Mbụ, lelee ihe ị ga-mkpa mbubata DVD camcorder video na Sony Vegas software
DVD mbanye (na kasị kọmputa, bụrụ na ọ bụghị, ịhụ ibubata camcorder video iji USB ma ọ bụ Fireware USB)
Olee otú mbubata DVD camcorder video ka Sony Vegas:
Nzọụkwụ 1: Ebe a fọrọ dere DVD ke kọmputa DVD mbanye
Nzọụkwụ 2: Gbaa Sony Vegas software na-aga Project / Import DVD camcorder Disc. Ná nsụgharị ụfọdụ nke Vegas ị ga-ahụ nke a n'okpuru File / Import / DVD camcorder Disc.
Nzọụkwụ 3: The obere vidiyo ga-azọpụta kọmputa gị dị ka MPEG2 (* .mpg) faịlụ.
Nzọụkwụ 4: Gaa na Project Media, chọta * .mpg video faịlụ dị nnọọ dị.
Ị nwere ike ghara mbubata commercially-emepụta DVD maka ndị discs na-ọkụ na oyiri-nchebe. Ị mkpa a dị ike DVD converting software idetuo videos mbụ.
DVD dere iji AVCHD camcorders (MT2S faịlụ) na-adịghị ghọtara site DVD Import. Ịkpọ camcorder akwụkwọ ntuziaka maka enyemaka, ma ọ bụ tọghata MT2S faịlụ ka niile ewu video formats.
DVD-RW camcorder discs gbara na VR mode naanị ike dị site Vegas ma ọ bụrụ na ị na-eji Windows XP Service Pack 2 ma ọ bụ ukwuu.
Part 2: Bubata-abụghị DVD camcorder Videos ka Sony Vegas
E wezụga DVD camcorder, e nwekwara ndị ọzọ ụdị camcorders dị ka diski ike mbanye camcorder, flash ebe nchekwa camcorder, miniDV camcorder, na na. Na-ewere na diski ike camcorder ka ihe atụ, na-adịbeghị anya na nsụgharị nke Sony Vegas ekwe ka ị mbubata faịlụ ozugbo na kọmputa. The zuru ezu nzọụkwụ ga-obere dị iche iche na nke ọ bụla version, ma otu ụkpụrụ na-emetụta onye ọ bụla version.
1. Gaa Njikwa / Project na anya n'ihi na Import (i nwere ike na-ahụ Import AVCHD camcorder).
2. Chọpụta camcorder n'ime Isi Iyi menu.
3. N'ime Destination menu, bulie a ọnọdụ ịkwaga faịlụ.
4. Pịa OK. Nke a ga-amalite usoro nke na-akpụ akpụ faịlụ site na camcorder na kọmputa.
Dị ka otu ihe ahụ dị importing DVD camcorder videos ka Vegas, ozugbo usoro a na-agwụ agwụ, ị ga-ahụ gị faịlụ na Project Media window.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị na-adịghị ahụ ndị a na nhọrọ n'ime gị version nke Vegas, ị ga-eji mkpa ndabara software-abịa gị camcorder ịkwaga faịlụ site na camcorder na kọmputa ahụ na mbụ mbubata vidiyo na Sony Vegas.
Gịnị bụ Next
Esonụ foto / audio / video formats na-akwado mbubata na Sony Vegas. Lelee ya bụrụ na gị na camcorder video-apụghị dị ka Vegas. Ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na-eji video Ntụgharị iji nweta Vegas akwado videos mbụ.
AA3, AAF, AIF, ASF, AU, AVI, BMP, BWF, CDA, igwu, DLX, DPX, DV, EXR, FLAC, GIF, HDP, IVC, jpg, M2T, M2TS, MOV, Sony MXF, MP3, MP4 , M4A, MPEG-1 na MPEG-2 video, OGG, OMA, PCA, PNG, PSD, QT, R3D, SFA, SND, SWF, TIFF, TGA, VOX, W64, WAV, WDP, WMA, WMV
Cheta na: Mgbe ụfọdụ, ị mkpa software ele ihe bụ ezigbo codec maka video mbubata ka Vegas. Iji mee otú ahụ, na-eji GSpot ịchọta ihe video codec na-eji na wụnye kwekọrọ ekwekọ codec mbubata ka Vegas. Download GSpot ebe a.
Olee otú Ọkụ tụgharịa camcorder Videos ka DVD
Olee otú iyi Obodo Video ka Chromecast si Windows / Mac / Android / iOS
Olee otú Bee WMA Files na Top 10 Best WMA egbutusị